Ụbọchị: 29 October 2019
96 nke Republic anyị. Anyi ji ncheta na obi ekele niile ndi dike anyi.
Altınordu Intercity Bus Terminal, nke Ordu mepere obodo rụziri site na nsọtụ ụzọ mgbanaka dị na Altınordu, na-aga n'ihu n'akwụsịghị akwụsị. UMU IGBO GA-EKWU NSOGBU NIILE 3 puku 177 [More ...]
Obodo Kocaeli nyere ndị ọrụ ya ọzụzụ nnapụta iji gbochie ọdịda nke ụlọ ọrụ na nzukọ dị iche iche. Citizensmụ amaala na-anọ na mbuli elu na-ada n'ihi ihe dị iche iche, ọkachasị mgbatu ike [More ...]
Ighalo zuru ezu na ihe eji eme njem, na atumatu ụgbọ elu: N'afọ 4000 mbụ nke Republic, teknụzụ e ji ewu ụlọ taa adịghị, ya bụ, mgbe enweghị akụrụngwa iwu ụlọ. [More ...]
Gọvanọ Fuat Gurel, Ndị Omeiwu Karabuk Cumhur Unal na Niyazi Gunes, Administrationzọ Ọrụ Ọchịchị na Transportgbọ njem pụrụ iche nke ndị otu ejikọtara na mgbasawanye ụzọ okporo ụzọ Keltepe Ski Center na ọrụ ịkpụzi ala. [More ...]
Ineszọ Okporo Trazọ Ọgba Mgba na inwa Dị Elu: linesgbọ okporo ígwè dị elu, ozi na map nke mba ndị na-eji ụgbọ elu ụgbọ elu dị elu dị. N’ozi a, ị nwere ike iru ozi nke ngalaba ahịrị. Biko atụfuo, [More ...]
Nkwado achọrọ maka ịgafe Train High Speed ​​si Düzce
Crimea Tatar Organisation Platform, nzukọ nzukọ emere na Ankara. Mgbe ọ na-ekwu okwu na nzukọ nke ndị otu Association of Crimean Turks nke Duzce bịara, Osman Kesen, onye isi nke Association nke Crimean Turks nke Duzce kwuru na [More ...]
Iri iron silk 275 kwuru puku
Onye Minista nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Cahit Turhan, Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan 30 October 2017'de nke okporo ụzọ okporo ụzọ Baku-Tbilisi-Kars (BTK) na-ebufe ibu na afọ abụọ, 275 puku tọn, ka o kwuru. Line, [More ...]
Afọ 20 agafeela kemgbe Mgbanwe ahụ, bụ nke nabatara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1,000 ndị ọbịa na 250 na ebe ngosi ihe nzuzo ya ebe 58 gosipụtara ọnwa maka ụlọ ọrụ TÜLOMSAŞ na Eskişehir, ndị injinia na ndị ọrụ arụpụtara. Visitors na ihe ngosi nka "Turkey mbụ anụ ụlọ ụgbọ ala" s [More ...]
Bayburt Gọvanọ Cüneyt Epcim Railway Nkọwapụta
Gọvanọ Cüneyt Epcim, n'okwu banyere arụmụka banyere ịgbanye okporo ụzọ si Bayburt gaa Gumushane kwuru na nkọwa ahụ egosighi eziokwu. Gọvanọ Epcim kwuru, "Anyị egbughi oge maka ụgbọ elu ọsọ ọsọ. Okwu nke obi [More ...]
Mgbatị ụgbọelu gbatịrị ụgbọ elu na Istanbul N'ihi Republic Day
28-29 N’ọnwa Ọktọba, e mere ka ụfọdụ usoro ụgbọ okporo ígwè gbasaa iji mee ka ụmụ amaala nọ na Istanbul sonye na mmemme Republic Day nke IMM haziri. İlọ Ọrụ Metro İstanbul AŞ, nke ndị enyemaka nke subslọ Ọrụ Metropolitan Obodo na-arụ ọrụ [More ...]
Ntaneti ntaneti na Istanbul na Day Day
Ntaneti ntaneti na Istanbul na Day Day. Obodo Obodo Istanbul (IMM), 29 October Republic Day na Istanbul na isi obodo Istanbul IMBWIFI mara ọkwa na ịntanetị agaghị enwe njedebe ụbọchị niile. MMA, na-ede nkwupụta nke ụgbọ mmiri, "IM, [More ...]
Federationtù Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ (FIDIC) kpọrọ Refik Melikoğlu ka ọ kwuo okwu na nnọkọ mba ụwa na London. A ga-eme 3 na 4 na Disemba 2019. [More ...]
Mkpọrọ Ejiri M Gawara Mumbai Ahmedabad
A ga-ahụ maka ị ga - arụ ọrụ ụgbọ elu nke Mumbai Ahmedabad Bullet: Mumbai Ahmedabad Bullet train bụ ụgbọ okporo ígwè mbụ dị oke elu nke India nke mejupụtara 508.17 km n'ogologo 12 Station. Aha oru ngo: Mumbai-Ahmedabad Train Speed ​​Speed [More ...]